भीम रावललाई परराष्ट्र , प्रदीपलाई सञ्चार दिने तयारी ! « Ok Janata Newsportal
भीम रावललाई परराष्ट्र , प्रदीपलाई सञ्चार दिने तयारी !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सरगमी बढेको छ । मन्त्री बन्नका लागि दौडधुप सुरु भएको छ भने कसैलाई मन्त्री बन्न अफर समेत आउने गरेको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रीमण्डल हेरफेरका लागि सहमति भइसकेको छ, तर मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएकाले केही समस्या उत्पन्न भएको नेकपा नेताहरु बताउँछन् । अहिले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय , अर्थ मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय अहिले खाली छन् । यी मध्ये अन्य मन्त्रालयका मन्त्री पनि हेरफेर हुने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले को–को मन्त्री बन्ने विषयलाई गोप्य राख्नुभएको र शीर्ष तहका नेताहरुलाई समेत जानकारी नभएको बुझिएको छ । बाहिर आएका समाचार पनि आंकलनका भरमा आएका हुन् । नेकपाका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री तथा सांसदले ओके जनतालाई दिएको जानकारी अनुसार भीम रावलको परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्भावना छ भने प्रदीप ज्ञवालीलाई सञ्चार दिने तयारी भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको जिमेवारी विष्णु पौडेललाई दिने तयारी भइरहेको ती नेताले बताए । पछिल्लो समय सरकारका कामकारबाही प्रति आलोचना बढ्दै गएपछि मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा प्रधानमन्त्री सक्रिय भएका हुन् ।
अहिले बहालवाला मन्त्री आफ्नो पद जोगाउन दौडधुपमा छन् भने नयाँ बन्ने सम्भावित आकांक्षीहरु लबिङमा छन् । केही पूर्वमन्त्री एवम् वर्तमान सांसद सरकारमा नजाने गरी बसेका छन् । अबको एकहप्ता भित्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको काम सकिने बुझिएको छ ।
चर्चा चलिरहँदा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत बन्नु भएका राववले भने आफू सरकारमा जाने मनस्थितिमा नरहेको बताउँदै आएका छन् ।